Mucaaradka Angola oo maxkamadda dastuuriga u gudbiyay dacwad ka dhan ah natiijada doorashada - BBC News Somali
Mucaaradka Angola oo maxkamadda dastuuriga u gudbiyay dacwad ka dhan ah natiijada doorashada
Image caption Hogaamiyaha mucaaradka ee Angola
Xisbiga mucaaradka ee ugu ballaaran dalka Angola ee UNITA ayaa maxkamdda dastuuriga ee dalkaasi geeyay dacwad ka dhan ah natiijada doorashadii madaxtinimada ee bishu aynu soo dhaafnay ka dhacday dalkaasi.
Xisbiga UNITA ayaa ku eedeeyay guddiga doorashada in natiijada gobolo badan oo ay shaaciyeen aysan aheyn mid dadku ay u codeyeen, balse ay tahay tiro been abuur ah oo laga soo gudbiyay xafiiska guddiga doorashada.
Arbacadii aynu soo dhaafnay ayay aheyd markii guddiga doorashada ee dalka Angola uu ku dhawaaqay natiijada doorashada, waxaana ku guuleystay xisbiga MPLA oo xukunka dalkaasi soo hayay tan iyo sanadkii 1975-tii.
Dhawaan ayay aheyd markii Maxkamadda Sare ee Kenya ay waxba kama jiraanka ka soo qaadday natiijada doorashadii madaxtinimada, taasi oo ka dhigan in axsaabta siyaasadda ay markale dib ugu laabtaan olole doorasho kahor doorashada ku celiska ah.
Go'aanka Maxkamadda Sare ee Kenya oo aan horay uga dhicin qaaradda Afrika ayaa muujinaya madax banaanida waaxda garsoorka ee dalkaasi, iyo sida ay uga go'an tahay in ay wajahaan murranada ka dhasha doorashada.
Waxaana ilaa iyo hadda aan kala cadeyn go'aanka maxkamadda dastuuriga ee dalka Angola ay ka qaadan doonto muranka ka dhashay natiijada doorashada.